मकाउमा शान्ति अधिकारीलाई फेरी रजत पदक प्राप्त. - Enepalese.com
मकाउमा शान्ति अधिकारीलाई फेरी रजत पदक प्राप्त.
इनेप्लिज २०७३ मंसिर १९ गते १६:०९ मा प्रकाशित
मकाउमा सम्पन्न भएको ३५ औ मकाउ इन्टर नेसनल म्याराथुन खेलमा शान्ति अधिकारीले रजत पदक हात पार्न सफल भएकी छिन् । नेपाल देशको लागि अर्को एउटा गौरबको कुरा हुन पुगेको छ l
शान्ति अधिकारी एक म्याराथुन खेलाडी मात्र नभएर एक सक्षम कराते खेलाडी पनि हुन् । शान्ति अधिकारीले कराते मा यस अघि धेरै स्वर्ण पदकहरु जिती सकेकी छिन् । महिला होस् या पुरुष नेपालको झन्डा विश्व बोकेको देख्न पाउन्दा देशको गौरब कुरा हुन आउछ । यस्ता खेलाडीहरुलाई राष्ट्रले खोजेर सम्मान गर्न आवस्यक देखिन्छ l